ဘတ်စကက်ဘောတစ်ဦးအနေအထားရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
သူတို့ရဲ့သဘောသဘာဝပေါ် မူတည်. အဆိုပါဘတ်စကက်ဘောတရားရုံးအပေါ်တစ်ဦးအခန်းကဏ္ဍကိုရွေးချယ်ပါ။ သငျသညျကိုကြိုတင်ပွဲချင်းပြီးသူလူတစ်ဦးလာကြတယ် အကယ်. တစ်ဦးတိုက်စစ်မှူးသို့မဟုတ်နောက်ခံလူတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်သင်နယ်မြေကိုခုခံကာကွယ်လိုပါလျှင်တစ်ဦးနောက်ခံလူသို့မဟုတ်မဏ္ဍိုင်ဖြစ်လာသည်။
မဟုတ်သေချာပေါက်အရပ်ရှည်ရှည်ကစားသမားတိုက်ခိုက်မှုဖြည့်စွက်ရပေမည်။ မြင့်မားသော igrakov အဘို့အစဉ်အမြဲကာကွယ်ရေးအာရုံစိုက်ပါ။
ဒါဟာအပေါငျးတို့သပုဂ္ဂိုလ်ရေးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ parameters တွေကိုပေါ်တွင်မူတည်သည် nv သငျသညျအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကစားနေတာအဘယျသို့အဆငျ့နှငျ့သငျအောင်မြင်ရန်နိုင်သလဲဆိုတာအဆင့်။
ငါ။ တိုးတက်မှုနှုန်း 201 စင်တီမီတာခဲ့သည့်အတွက်ပထမဦးဆုံးအခန်းကိုဆန့်ကျင်ကစားဒီနေရာမှာရေလောင်းတစ်ဦးချင်းကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအားလုံး (ဒီ egoism ဖြစ်ပါတယ်) သင်လုပ်ချင်သောအရာကိုမမူတည်သော်လည်း, သင်သည်အကောင်းဆုံးအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကို။ အလွန်ခဲမဆိုမျိုးရှိသည်သောကစားသမားဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှအခွက်တဆယ်ပြောဆိုရန်။ အဆိုပါကစားသမားကောင်းတစ်ဦး dribble တစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောခံစားမှု pass ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်အဝေးကအဖြစ်စနိုက်ပါဖြစ်နိုင်ပြီး, ပျမ်းမျှနှင့်အတူ, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဖြစ်စေအဲဒီမှာပိတ်ဆို့ရိုက်ချက်များ (ကျနော်အတွေ့အကြုံမကူညီကြလိမ့်မည်သင်တို့ကိုပြောပြနိုင်၏အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ် သို့မဟုတ်မ) ။
ထိုကြောင့်ငါပိုပြီးနှင့်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူဖို့ပေါ်တွင်သင်၏ paramatry ချင်ပါတယ်။
အမြင့်, အမြန်နှုန်းနှင့်တိကျမှန်ကန်မှု, ကစားသမားများ၏သုံးခုကိုအဓိကလက္ခဏာများ။
ဒါဟာအားလုံးသင်သည်အဘယ်သို့နီးကပ်လာ, တိုက်ခိုက်သို့မဟုတ်ကာကွယ်ရေးအပေါ်မူတည်, ငါမကြိုက်ဘူးဖြင့်ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
ယခုငါအနီးကပ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ဒါပေမယ့်ကြီးထွားအလွန်မြင့်မားမရှိ, ခုန် (ဒီအပေါ်အန္တရာယ်ရှိကစားသမားများ၏စောင့်ရှောက်မှုအရမ်းမထိုက်မတန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဘူး) ဒီတော့-ဒါဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ 1 အရေအတွက်ကိုအနေအထားကိုအချက်ကိုယ်ရံတော်မြန်ဆန်ချိုး, 'passes ၏ဖြန့်ဖြူးဖြစ်ပါသည်ငါ့အဘို့ဒါ UHP ကြီးထွားမှုနှုန်းမြင့်ဖြစ်၏။
သငျသညျနီးကပ်လွန်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသော်လည်း, သငျသညျ, ထို့နောက် patronize မှပြီးအောင်နှင့်ကောင်းတဲ့လိုပါလျှင်
များသောအားဖြင့်ရာထူးကစားသမားမဟုတ်ဘဲ (မိမိတို့အတိုးတက်မှုနှုန်း 180-190sm ပေမယ့်, ဒါပေမယ့်လည်းအများကြီးနိမ့်), အမြင့်ဆုံး, ဒါပေမယ့်ဘောင်းများနှင့်ပယ်ရှားသောအဖြစ် bouncy ၌တည်၏။ သောကြောင့် ကစားသမားတိုက်ခိုက်နေသူမတူညီတဲ့အကွာအဝေးက c, ကောင်းတစ်ဦးသွန်းရှိရမည်။
Легкий форвард — задачи, его набор очков, как и у атакующего защитника, но форвард выше, средний рост не ниже 195см(ну около 200см). Должен обладать хорошим броском и подбором мяча. И должен блокировать броски.
(ငါကလမ်းပြင်းထန်သောအင်အားကိုဖတ်အဖြစ်, ဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာမှာမဆိုလမ်းထဲမှာရန်ပွဲမရှိဘဲရှိသင့်) Tyazhlov ရှေ့ဆက်၎င်း၏အဓိကတာဝန်ဘောလုံးကို၏ရွေးချယ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစတိုင် 20 အချက်များပေါ်တွင်ကွာဟမှုရရှိမှုနေသောကစားသမားအဲဒီမှာဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပေါ်နှင့်နီးပါးမျှအမြတ်, ဒါပေမယ့်ကိုသာကစား၏ရွေးချယ်ရေးအတွက်အာရုံစူးစိုက်သောသူတို့ကိုရှိပါတယ်။ ဤအမှု၏တိုးတက်မှုနှုန်း 2h မီတာနှင့်အတူစတင်, ဒါပေမယ့်လည်းနိမ့်ရှိခဲ့သည်။
သူဂိမ်းနှုန်းအချက်များသွင်းယူထိုကဲ့သို့သော NBA ချန်ပီယံတိုးတက်မှုနှုန်း 216sm 100 အဖြစ်အမြင့်ဆုံးကစားသမားပညတ်တော်တို့ကို၏ Center က။
တောင်းအောက်မှာဂိမ်း၏တာဝန်, အချက်ကိုအချက်များအစုတခုအချို့မဏ္ဍိုင်အရည်အသွေးအားကစားသမားများ, သူတို့သည် TF ၏အနေအထားကိုပြောင်းလဲနောက်ထပ်ဝေးလက်စွပ်ကနေရွှေ့နှင့်နေဆဲင်း၏တာဝန်လုပ်ဆောင်။
, ကံကောင်းပါစေ Choose!
Posted in, အားကစား
61 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,289 စက္ကန့်ကျော် Generate ။